Notsapainay ny Honor 4X | Androidsis
Manala baraka eto amintsika ny voninahitra. Ny karazana fitaovan'ny Huawei mikendry ny tsena eropeana dia efa manana andiana firavaka misy izay miavaka amin'ny sandam-bola tsy azo lavina. Ary ny Honor 4X dia tsy ho faningana.
Efa amin'ny fotoana mamakafaka ny Honor 3C izahay, fitaovana iray manana tombony mihoatra ny ampy ho an'ny mpampiasa antonony rehetra ary ny vidiny novaina dia nahatonga an'ity terminal ity safidy handinika. Izahay dia mitondra anao feno Fanadihadiana hajaina 4X, izay anehoanay ny tsiambaratelo rehetra amin'ny phablet amin'ny vidiny miavaka: 199 euro
1 Manaja 4X, vita tsara na dia finday antonony aza
3 Manomeza filokana amin'ny vahaolana manokana hamelezana ny 4X
4 Veloma amin'ny famoahana telefaona isan'andro
5 Fakan-tsary tena matanjaka
6 Manomeza vidiny 4X ary misy
7 Hevitry ny Editor
Manaja 4X, vita tsara na dia finday antonony aza
Na eo aza ny vidiny namboarina, ny Honor 4X's design dia mihoatra ny marina. Amin'ny fandrefesana 152.9 x 77.2 x 8.7 mm dia mazava fa, na eo aza ny phablet misy efijery 5.5-inch, dia azo tanterahina tsara ilay terminal.
Tiako manokana ny telefaona mavesatra, toy izany koa ny azy ireo Gramin'ny 170 tsy manelingelina ahy izy ireo. Mazava ho azy, ireo mpampiasa izay maniry ny terminal maivana dia hahatsikaritra fa ny Honor 4X dia milanja mihoatra ny telefaona mahazatra. Zavatra azo takarina raha jerena ny habeny ary terminal eo afovoany izany.
Ny lafiny ankavia amin'ny terminal dia madio tanteraka, raha amin'ny ilany ankavanana ho hitantsika ny fanalahidy fanaraha-maso ny feony ary bokotra herinaratra Terminus. Eo an-tampony dia misy ny vokatra jack, raha eo amin'ny ilany farany dia hanana ny mpampitohy micro USB sy ny mpandahateny stereo an'ny phablet aziatika vaovao isika.
Mpanamboatra maro no manota amin'ity lafiny ity ary matahotra aho fa tsy ankanavaka ny Honor 4X. Ny olan'ny mpandahateny dia olana satria rehefa milalao lalao na mankafy atiny multimedia azontsika atao ny mametaka ny fivoahan'ny mpandahateny tsy nahy mampihena be ny feon'ny telefaona.
Olana iray efa hitantsika tamin'ny telefaona hafa toa ny Mi2 ary mety hahasosotra tokoa izany. Bebe kokoa raha raisintsika fa ireo karazana terminal ireo dia miompana amin'ny fahafinaretana atiny multimedia. Olana iray izay voavaha amin'ny fampiasana headphone, fa lesoka daholo.
Eo amin'ny sisin'ny efijery misy bokotra telo mikasika. Tonga eto amin'ny lesoka famolavolana faharoa isika: tsy miverina miverina ny bokotra, noho izany dia ao anaty tontolo tsy dia misy jiro no hahitanao ny tenanao mitendry bokotra mandra-pahitanao ny lakile mety. Mazava ho azy, matokia ianao fa afaka andro vitsivitsy dia ho fantatrao izay misy ny bokotra fikitika.
Ny famaranana ny Honor 4X dia marina kokoa, na dia vita amin'ny plastika aza. Ary io dia ny famaranana ny polycarbonate back casings dia manana famaranana tena tsara ary ny firafiny dia tena mahafinaritra azy ny mikasika azyAnkoatr'izay dia sarotra be ho azy ny miala eo an-tananao, zavatra iray izay ankasitrahako amina terminal misy an'io habeny io.
Rehefa manala ny fonon'ny terminal isika dia mahita ny bateria azo esorina, miaraka amin'i slot karatra SIM 4G roa ary ny fanohanana ny karatra micro SD, tena ilaina ao amin'ity terminal ity, na dia hiresaka momba izany aza isika any aoriana.
Farany, ny takelaka metaly manaingo ny fakan-tsary sy ny bokotra herinaratra dia manome azy io fikitihana premium tena mahaliana. Raha fintinina, ary amin'ny fiheverana ny mpihaino kendreny dia azoko lazaina fa ny Honor 4X dia miorina tsara na eo aza ny olana kely misy eo amin'ilay mpandahateny: mahafinaritra ny mikasika ny terminal, manana endrika tsara tarehy ary manome fahatsapana kalitao ny bokotra.
Ny iray amin'ireo teboka manan-danja indrindra amin'ny phablet dia ny efijery. Ary eto dia tsy mandiso fanantenana ny Honor 4X. Hanombohana azy dia nahatanteraka izany ny ekipa mpamolavola ny efijery dia mitana ny 75% amin'ny tapany eo aloha, mampihena ny haben'ny fitaovana.
Ny fanapaha-kevitra dia mahatratra 1280 x 720 teboka, manolotra 267ppp hakitroka, somary fohy ho an'ny terminal misy efijery mitovy habe aminy. Aza matahotra anefa, tena tsara ny fisehon'ny écran; tsy voamariky ny fotoana misy anao ny fisian'ireo piksela ary tena maranitra ny lokony. Ho fanampin'izay, ny Honor 4X dia hanao mamela anao hametraka ny mari-pana loko, manolotra kalitaon'ny efijery mihoatra ny ampy ho an'ny mpampiasa rehetra.
Mikasika ny mizaha zoro, Phablet vaovao an'i Huawei dia manolotra sakany somary malalaka, mamela anao hankafy izay atiny rehetra amin'ny zoro tsy misy olana. Mariho fa ny phablet dia mitondra tena tsara amin'ny tontolo misy anao. Nampiasako izany tamin'ny andro tena nilentika tsy nisy olana.
Misy lohahevitra iray izay tsy dia tiako loatra ary efa hitako tany amin'ny terminal hafa an'ny faritra Honor. ny Honor 4X dia tsy mampiditra fiarovana Gorilla Glass Ary, na dia eo aza ny mpiaro azy manokana, tena ampirisihina hividy mpiaro efijery ianao, ary raha vita amin'ny vera marokoroko dia tsara kokoa izany.
Taorian'ny fampiasana tapa-bolana dia niaritra fery kely tamin'ny écran ilay terminal. Na dia marina aza fa zara raha zahana izany, ary somary sarotiny aho ary mitondra ny telefaona miaraka amin'ny lakile na izay zavatra rehetra ao am-paosiko, aleo mitandrina kokoa toy izay mandefa ny telefaona hanamboarana azy.
Manomeza filokana amin'ny vahaolana manokana hamelezana ny 4X
Ny Honor 4X mikapoka fisaorana a HiSilicon Kirin 620 SoC, processeur valo-mahery matanjaka izay mahatratra ny hafainganan'ny famantaranandro 1.2 GHz. Na dia marina aza fa tsy izy no chip mahery indrindra eny an-tsena, manome fampisehoana mihoatra ny ampy izy io, ahafahanao mankafy lalao tsy misy olana, na inona na inona ahoana ny vaovao Na inona na inona, misaotra ny Mali 450 GPU.
Ho fanampin'izany, ny fahatsiarovany RAM 2 GB dia mamela ny Honor 4X mihazakazaha milamina. Amin'ity lafiny ity dia afaka milaza isika fa manome fampisehoana mihoatra ny ekena. Ny olana dia miaraka amin'ny rindrambaiko, izay mavesatra amin'ny traikefan'ny mpampiasa.
Na dia Android 4.4 KitKat aza ilay kinovan'ny rafitra fiasan'i Google napetraka ao amin'ny Honor 4X, ilay sosona Emotion UI dia manimba kely kokoa ny fampiasana ny terminal. Tsy olana tsikaritra mandritra ny fampiasana ara-dalàna, fa rehefa manararaotra multitasking dia lasa manahirana.
Iray amin'ireo fiasa mahaliana indrindra amin'ny phablet ny fahafaha-manararaotra ny haben'ny efijery ary ny fisian'ny multitasking manolotra fampiasa efatra farafahakeliny eo amin'ny efijery, fa tsy ny menio cascade mahazatra, dia manakana be loatra ny mety hisehoan'io endri-javatra io ...
Misy fotoana rehefa Mety kokoa ny mankany amin'ny menio lehibe ary mahita ilay rindranasa tiana hampiasaina toy izay hanararaotra multitasking. Bibikely manelingelina izay antenainay fa hovahan'izy ireo amin'ny fanavaozana ho avy.
Ho setrin'izany, mahita sehatr'asa azo alamina tanteraka izay ahafahanao manamboatra safidy maro amin'ny findainao, manamboatra ny endriny amin'ny fomba tena mahaliana.
Antsipiriany iray hafa izay tsy tiako loatra dia ny Manomeza fahatsiarovana anatiny 4X; Na eo aza ny fitehirizana anatiny 8 GB, manana 4 GB tokoa izahay. Pittance miaraka amin'ny fotoana. Tsy maintsy atao ny mampiasa karatra micro SD, ny ambony indrindra dia 32 GB, hanararaotana ny fahafahan'ny finday io. Fahombiazana azo avela azo hadinoina raha jerena ny vidiny, fa amin'ny farany tsy fahombiazana
Veloma amin'ny famoahana telefaona isan'andro
Ny fizakan-tena dia iray amin'ireo tanjaky ny Honor 4X, tsy misy isalasalana. Ary izy no izyNy batterie 3.000 mAh an'ny Huawei phablet dia mahazaka jogging isan'andro tsy misy olana. Ny fampiasana azy io dia nandany roa andro aho nefa tsy nameno ny bateria, ary aorian'ny andro fampijaliana tsy tapaka, lalao fitsapana ary miaraka amin'ny Spotify milalao tsy an-kijanona, dia niaritra ahy tontolo andro. Azonao atao ny mahita fa ny Honor dia nanao ezaka be tamin'ity lafiny ity, ary ny mpamokatra lehibe hafa dia afaka mianatra ...
Ity dia iray amin'ireo lafiny isongadinan'ny Honor phablet. Y Fakan-tsary lehibe an'i Honor 4X dia nahazo fankatoavana ny takelaka noho ny sensor 214 megapixel Sony Exmor RS IMX13 mahery. Lensa iray manolotra fampisehoana mahavariana fotsiny. Ny fitsapana notanterahinay dia tsy mety nahafa-po kokoa, manasongadina ny fifantohan'ilay fitaovana haingana.
Miaraka amin'ny vavahady f / 2.0 tena maranitra sy antsipiriany ireo sary, ny ampahany dia misaotra ny mpandefitra lahatsoratra tena tsara an'ireo sary. Azontsika atao ihany koa ny manamboatra masontsivana marobe toa ny mifanohitra, ny famirapiratana, ny mahavoky, ny ISO na ny mizana fotsy.
Amin'ny andro antoandro dia manolotra a kalitao mahatalanjona miaraka amin'ny haavo miharihary. Ao anaty na tontolo iainana tsy misy jiro, efa miseho ny tabataba atahorana, zavatra lozika amin'ny telefaona finday. Fa ny mazava dia ny fakan-tsary Honor 4X dia ambony lavitra noho ny mpifaninana aminy.
Su Fakan-tsary mialoha 5 megapixel manolotra fampisehoana mihoatra ny ampy ahafahan'ny antso an-tsary na ny sarin-tena amin'ny kalitao mendrika. Tsy misy zavatra azo kiana amin'ity resaka ity.
Manomeza vidiny 4X ary misy
Ny Honor 4X dia misy any Espana izao a soso-kevitra 199 euro. Afaka mahita izany ianao amin'ny magazay an-tserasera toa an'i Amazon na Redcoon. Raha mitady phablet mora vidy manome fahombiazana tsara ianao dia aza misalasala: Honor 4X no vahaolana. Mazava ho azy, tsarovy ny mividy karatra 16-32 GB sy mpiaro efijery tsara.
Ny fakantsary lehibe an'ny Honor 4X dia iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena
Ny bateria dia maharitra roa andro tsy misy olana aorian'ny fampiasana mahazatra
Sarimihetsika avo lenta na eo aza ny vidiny ambany
Ny toe-javatra iainan'ilay mpandahateny dia midika fa azonao atao ny mametaka azy tsy nahy rehefa mijery horonantsary na mankafy lalao ianao
Fahatsiarovana anatiny tena voafetra, ilaina ny fananana karatra micro SD
Ny safidy multitasking an'ny interface Emotion UI 3.0 dia tena manahirana ary tsy dia ilaina loatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Honor 4X, famakafakana ny phablet Huawei vaovao
antonio ceron dia hoy izy:
Tsy azoko ny fomba hamafana ny hevitra ratsy anao raha vantany vao tsy misy serivisy teknika ity terminal ity
Mamaly an'i antonio ceron
Eto, ry namako, mamelà ahy noho ny nilazako taminao fa tsy fanao ny mamafa ny hevitra ratsy. Izay misy ompa na teny ratsy feo ihany no voafafa.
Miala tsiny fa mbola tsy teto izy ity fa raha afaka manome toky anao aho fa namafa hevitra iray aho nefa tsy nahatafintohina olona izany, dia lazao fotsiny ny tena marina momba izany izay anontaniako an'i Huawei raha tsy marina izany fa tsy misy dikany ny serivisy ara-teknika ary afaka manome anao ny rehetra ny porofo ananako mihoatra ny 40 andro niantso 902 sy nanoratra mailaka ary androany miandry ny terminal
Eny, 44 andro niandrasana ny Huawei Honor 4x ary tsy misy na inona na inona dia tena finday sinoa tena kely antoka noho ny fivarotana sinoa manodidina
Mila fanampiana olona afaka mampahafantatra ahy ny fomba anaovako mitory an'ity orinasa nivarotra finday ahy ity izay tsy mandeha hatramin'ny andro voalohany aho ary tsy nanamboatra azy io nandritra ny 47 andro ary tsy namaly akory dia mankasitraka izay afaka manoro hevitra. izaho, misaotra
Salama, manana ny kinova kolombiana an'ny G735 aho (izay telefaona mitovy), azoko lazaina fa tsara ny fakantsary, fa iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena? Mazava ho azy fa tsia, fa mety ho iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny telefaona antonony.
Raha ny momba ny mpandahateny azy, dia heveriko fa manana hery tsara (lehibe kokoa noho ilay kinova kely) ary amiko dia manana toerana tsara kokoa izy io. Tsara ny efijery ary tiako ny mari-pana amin'ny loko, tsara ny zoro fijeriny, avy amin'ny zoro tena mahafinaritra ihany izy no very kalitao kely. Masiaka ny batterie raha tsy hiteny aho, sahy milaza aho fa maharitra kokoa noho ny G2 avy amin'ny lG izay tamin'izany no iray amin'ireo tsara indrindra. Tondroy somary mavesatra ny sosona fanaingoana azy, nefa tena mandeha tsara izy io noho izy manana ondrilahy roa gig. Mikasika ny fampiasana multitasking, mety ho somary manahirana ihany ny fisian'ny fampiharana 4 vao tsy ela akory izay, fa fampiharana bebe kokoa no azo idirana amin'ny alàlan'ny fanaovana hetsika mankany amin'ny lafiny iray hanehoana ny hafa.
Tariho ny tafikanao handresy amin'ny Tiny Troopers 2: Ops manokana